Mitambo, 01 Gunyana 2017
Chishanu 1 Gunyana 2017
Zimbabwe Yokweshana neNamibia neSvondo
Zimbabwe inofanira kukunda kuti ienderere mberi nemakwikwi aya.
Chikunguru 19, 2017
Zimbabwe Inorwisa Zvakasimba Mumitambo ye2017 First Global Challenge Asi Ichizotadza Kubudirira
Nyika dzakakunda Zimbabwe nevamwe vayo dzinoti Georgia, Romania ne Benin pamutambo wakaitwa neChipiri, izvo zvakasiya Zimbabwe iine mapoinzi mazana mana nemakumi matanhatu nemanomwe.
Hurumende Yoramba Ichizvicherera Gomba neKuramba Ichikwereta Mari
Hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichienderera mberi nekukwereta mari yekushandisa munyika kana kuti domestic debt. Izvi zviri kuuya panguva iyo bhanga reIMF nereWorld Bank akayambira kuti kuita izvi kuchapa kuti nyika itadze kubuda mumadhaka mairi.
Chikunguru 17, 2017
Zimbabwe Inokundwa kuNamibia
Zvikwata zvenyika zvemutambo werugby nechenhabvu zviri kudzoka zviri maoko chete kubva mukushanya kwazvo kuNamibia mukupera kwesvondo.